Satria ve « gasigasy » ?
Fampisehoana an-tsehatra anisan’ny niavaka tokoa ny tetsy amin’ny Alliance française Andavamamba, ny faran’ny herinandro teo. Tena tsara ! Tena kanto ! Andro vitsivitsy nialoha io seho io anefa, re tsilian-tsofina fa tsy nisy namaly mihitsy ny antso sy fangatahana fiaraha-miasa nataon’ny mpikarakara. Saika nanosi-bohon-tanana ireo nangatahana fanohanana. Tsy marisika ny hanohana zavatra « gasigasy » ve ny mpanambola ?
Mahalasa eritreritra ihany raha ny trano kolotoraly vahiny, toy ny Alliance française, indray no mahatsapa sy manome lanja sy hasina ny kolontsaina malagasy. Nomen’izy ireo maimaimpoana avokoa ny efitrano malalaka sy ny fitaovana (fanamafisam-peo…) nilaina tamin’ny fampanjariana ity fampisehoana ity. Rariny raha tehaka nirefodrefotra ny nataon’ny mpijery tamin’ny fotoana nahalalana izany.
Porofo mitohoka amin’ny tenda ny tahaka izao fa tsy mahalala akory ny kolontsainy sy izay heverina ho laharam-pahamehana amin’izany ny Malagasy sasany. Tsy fantatr’izy ireo ny maha zava-dehibe ny famerenan-kasina indray ny kolontsaina malagasy. Tsy azo lavina ihany koa anefa fa marefo manoloana ny kolontsain’ny hafa ny fahalalan’ny Malagasy ny kolontsainy, noho ny antony maro…
… Ezaka iaraha-manana ny fametrahana ny kolontsaina malagasy eo amin’ny toerana sahaza azy. Tsy vitan’olon-tokana na fikambanana samy irery ny fanaovana izany fa ny tsirairay mihitsy. Paikady azo ampiharina, ohatra, ny fitaizana ny taranaka malagasy amin’ny kolontsainy. Miainga ao an-tokantrano, any an-tsekoly, isan-tsehatra, ny fiarahamonina, sns, samy maneho izany ho hitan’ny zaza malagasy.
Raha sarotra ny manatanteraka izany, maninona indray raha amin’ny alalan’ny lalàna na didy (izay ilazana azy tsy maninona) no hamerenana indray ny fahalalan’ny Malagasy ny kolontsainy ? Sa ve midika ho faneriterena ny tahaka izany ?
Raha fanerena hitondra soa moa maninona ? Ny Malagasy aza, terena (ankolaka na mivantana) hanary ny maha izy azy, toa mahazaka ihany, ka raha lalàna hoentina hampitiavana azy ny soatoaviny, ny kolontsainy, ny fombany, ny taniny, sns, ve mety hananan-tsiny ny fampiharana izany?
Na ho eny na ho tsia ny valin’ireo fanontaniana ireo, mendri-piderana ireo rehetra nitoto nahafotsy sy nahandro nahamasaka ny fampisehoana faha-90 taon’i Fidimalala !